The Battle: Roar to Victory (2019) | MM Movie Store
ဒီကားကတော့ 1920 လောကျက ကိုရီးယားနိုငျငံကို ဂပြနျ တှေ သိမျးပိုကျစဉျကာလကိုအခွပွေုရိုကျကူးထားတာပါ…..ဂပြနျတှရေဲ့ရကျစကျမှုတှဟော သိတဲ့အတိုငျး တဈကမ်ဘာလုံးက
သိမျးပိုကျစဉျကာလမှာ ကိုးရီးယားစဈတပျတငျမဟုတျဘဲ ပွညျသူတှကေပါတတျစှမျးသရှေ့ ဂပြနျစဈတပျကို တိုကျထုတျခဲ့ကွပါတယျ…ဒီကားကတော့ အဖှဲ့ သား၁၆ယောကျနဲ့ ဂပြနျ အယောကျ ၅၀၀ကိုပွောကျကြားစဈဟနျသုံးပွီး တိုကျထုတျခဲ့တာကို ရိုကျပွထားတာပါ….
ဒီ ၁၆ ယောကျဟာ နာကဉျြးခကျြကိုယျစီနဲ့ မိမိတို့ ကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျတဲ့အရညျအခငျြးတှကေိုအသုံးခပြွီး ကြားနာတှလေို ဂပြနျကို ဆျောကွတာ တကယျ့ကိုအားရစရာကွီးတှပေါ…ဇာတျလမျးအစကနေ အဆုံးထိကို စဈပှဲတဈပှဲပွီး တဈပှဲ….ပွောကျကြားစဈဟနျတှရေယျ…အရေးကွီးခေါငျးဆောငျတှကေိုစနိုကျပါတှနေဲ့ခြောငျးမွောငျးပဈခတျတာတှေ …
ဂပြနျစဈခေါငျးဆောငျတှနေဲ့စဈဗြူဟာ ပွိုငျဆိုငျခနျးတှနေဲ့….တျောတျောကွီးကို မိုကျပါတယျ…နောကျတဈခုက ရိုကျခကျြတှကေ တျောတျောကိုမိုကျသလိုကိုရီးယားစဈသားတှရေဲ့ နာကဉျြးခကျြအောကျက ဓားခကျြ သနေတျခကျြအောကျမှာ အသကျပြောကျသှားတဲ့ ဂပြနျတှရေဲ့ပုံကိုလညျး ထငျသာမွငျသာအောငျပွထားတာက အားရစရာကွီးတှပေါပဲ…….
ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး…သရုပျဆောငျတှကေ နာမညျကွီးသရုပျဆောငျတှကွေီးပါတဲ့အပွငျပွသခြိနျ ၂ နာရီကြျောမှာလညျး အီသှားတာကိုမရှိသလောကျပါပဲ…
ဒီကားကတော့ 1920 လောက်က ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ဂျပန် တွေ သိမ်းပိုက်စဉ်ကာလကိုအခြေပြုရိုက်ကူးထားတာပါ…..ဂျပန်တွေရဲ့ရက်စက်မှုတွေဟာ သိတဲ့အတိုင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးက
သိမ်းပိုက်စဉ်ကာလမှာ ကိုးရီးယားစစ်တပ်တင်မဟုတ်ဘဲ ပြည်သူတွေကပါတတ်စွမ်းသရွေ့ ဂျပန်စစ်တပ်ကို တိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်…ဒီကားကတော့ အဖွဲ့ သား၁၆ယောက်နဲ့ ဂျပန် အယောက် ၅၀၀ကိုပြောက်ကျားစစ်ဟန်သုံးပြီး တိုက်ထုတ်ခဲ့တာကို ရိုက်ပြထားတာပါ….
ဒီ ၁၆ ယောက်ဟာ နာကျဉ်းချက်ကိုယ်စီနဲ့ မိမိတို့ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းတွေကိုအသုံးချပြီး ကျားနာတွေလို ဂျပန်ကို ဆော်ကြတာ တကယ့်ကိုအားရစရာကြီးတွေပါ…ဇာတ်လမ်းအစကနေ အဆုံးထိကို စစ်ပွဲတစ်ပွဲပြီး တစ်ပွဲ….ပြောက်ကျားစစ်ဟန်တွေရယ်…အရေးကြီးခေါင်းဆောင်တွေကိုစနိုက်ပါတွေနဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်တာတွေ …
ဂျပန်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်ဗျူဟာ ပြိုင်ဆိုင်ခန်းတွေနဲ့….တော်တော်ကြီးကို မိုက်ပါတယ်…နောက်တစ်ခုက ရိုက်ချက်တွေက တော်တော်ကိုမိုက်သလိုကိုရီးယားစစ်သားတွေရဲ့ နာကျဉ်းချက်အောက်က ဓားချက် သေနတ်ချက်အောက်မှာ အသက်ပျောက်သွားတဲ့ ဂျပန်တွေရဲ့ပုံကိုလည်း ထင်သာမြင်သာအောင်ပြထားတာက အားရစရာကြီးတွေပါပဲ…….
ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး…သရုပ်ဆောင်တွေက နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေကြီးပါတဲ့အပြင်ပြသချိန် ၂ နာရီကျော်မှာလည်း အီသွားတာကိုမရှိသလောက်ပါပဲ…
(Drive Google) Large Size ~ Download
(Drive Google) Small Size ~ Download